CFM: “Mba hangarahara ny voka-pifidianana” | NewsMada
CFM: “Mba hangarahara ny voka-pifidianana”
“Ho anareo mpikirakira voka-pifidianana, heverinay amin’izao fanangonana ny voka-pifidianana izao fa tokony hazava ho fantatry ny rehetra ny vokatra marina azon’ny kandidà tsirairay isaky ny biraom-pifidianana sy isaky ny SRMV. Amin’izay, ho foana avy hatrany ny ahiahy sy ny disadisa mety hiseho.” hoy ny fanambaran’ny CFM, afakomaly. Ho firenena filamatra aty Afrika i Madagasikara amin’ny fikirakirana fifidianana mangarahara, azo antoka ary eken’ny rehetra.
Mila hajain’ireo kandidà ny soatoavina malagasy: adin’ombalahin’ny mpianakavy ka ny resy, tsy akoraina. Tokony hifanome tanana sy hampanjaka ny demokrasia ho antoky ny fampandrosoana maharitra izany izy ireo.
Mila manaja ny safidim-bahoaka ireo kandidà
Matoky ny CFM fa hanaja ny safidim-bahoaka ireo kandidà sy ny mpomba azy avy. Tokana ny tanjona: ny hampandroso an’i Madagasikara. Ao anatin’izany ny fitoniana, ny tany tan-dalàna, ny fitiavana ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana iombonana.
Manantena ny vahoaka malagasy fa ho mpirahalahy mianala ireo kandidà, ho trano atsimo sy avaratra ary ho tanan-kavia sy havanana. Koa samy hahay handamina ny mpomba azy avy mba hisian’ny filaminana sy ho fiarovana ny tombontsoan’ny firenena.
“Hifanentana isika ka hohalavirina tahaka ny fasam-bao ny fifampihantsiana na fifandranitana, mety hiteraka ady eo anivon’ny fiarahamonina”, hoy ny fanambarana.